Iikhosi ezingama-300 + zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo 2022
Nazi iikhosi ezingaphezu kwama-300 zasimahla kwi-Intanethi ezinezatifikethi ezinokuprintwa kunye neziqinisekiso onokuthi uthathe inxaxheba kuzo kwaye uqinisekiswe ekugqibeleni. Isatifikethi sinokusetyenziselwa ukuphucula i-CV yakho okanye ukufaka isicelo kunye nokufumana imisebenzi okanye ukufumana ukunyuselwa kwindawo yokusebenzela kwilizwe lakho okanye kwilizwe langaphandle.
Ulwazi bathi ngamandla. Kungenxa yoko le nto Study Abroad Nations izinikele ekunikeni ulwazi olusebenzayo kubo bonke abafundi bayo ukubaxhobisa.
Malunga neekhosi ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo
ICandelo loLawulo lwaBasebenzi elineZatifikethi eziPrintwayo
Intshayelelo kuPhuhliso lweMidlalo kwiKhosi eneZatifikethi eziPrintwayo
Uphuhliso lweWebhu kwiKhosi yasimahla ekwi-Intanethi enesiqinisekiso esishicilelweyo
Inkqubo yoPhuculo lweSoftware eSimahla kwiKhompyutha eneZatifikethi eziPrintwayo
Ushishini kuqoqosho oluKhulayo kwiKhosi ye-Intanethi eneZatifikethi eziPrintwayo
Imigaqo yokuThengisa Simahla kwi-Intanethi
Inkqubo ye-IT yoLawulo lwaSimahla kwiKhosi eneZatifikethi eziPrintwayo
Intshayelelo kwiKhosi yezeMali kwiNkxaso yezeMali eneZatifikethi eziPrintwayo
Izinto ezisisiseko kuyilo lweGraphic kwiKhosi ekwi-Intanethi enesiQinisekiso
Izinto eziBonakalayo zoYilo loNxibelelwano loMsebenzisi kwiKhosi ye-Intanethi enesiQinisekiso
Iikhosi ezikwi-Intanethi zikunika ukuguquguquka kokwenza nantoni na ofuna ukuyenza naphi na apho ufuna ukuyenza ngelixa ufunda kwi-Intanethi apho ekugqibeleni uyakufumana isatifikethi sale khosi.
Zininzi izifundo ezenziwa kwi-Intanethi ezinezatifikethi ezinokuprintwa kodwa ndiza kubhala ngaphezulu kwama-300 kwezi khosi zasimahla ezikwi-Intanethi endiziphandileyo kwaye ndinolwazi olusemthethweni ngokubhekisele.
Ngaphambi kokuba ndiqhubeke, ndingathanda ukukukhanyisela kwezinye zezihloko ezimangalisayo endizibhalileyo ngaphambili kule bhlog ndiqinisekile ukuba uya kuba nomdla njengomfundi wamanye amazwe.
Kucacile, ayinguye wonke umntu othanda iikhosi ezikwi-Intanethi. Abantu banezizathu ezahlukileyo zokuba kutheni okanye bengafuni ukuthatha inxaxheba kwiikhosi ezikwi-Intanethi kodwa nangona kunjalo, ngenxa yabo bathanda iikhosi ezikwi-Intanethi, siya kubonelela ngolwazi olufunekayo kwaye sihlaziye iwebhusayithi yethu rhoqo kwizifundo ezifumanekayo kwizifundo ze-Intanethi nanini na xa funda ngazo.
Kwangoko, ndibhale uluhlu olubanzi lwenqaku iikholeji ezikwi-Intanethi ezingabizi ntlawulo endikhuthaze abafundi ukuba babe kweli qonga ukuba basebenzise ithuba.
Nangona ezi zifundo zibizwa ngokuba zizifundo ezikwi-Intanethi, kodwa, inyani yokuba kwi-Intanethi ayiphiki ubunyani bokuba zisabaluleke kakhulu kwaye izatifikethi ezifumaneke emva kwekhosi ekwi-Intanethi zithathwa njengezifanelekileyo.
Ngapha koko, iinkqubo ezikwi-Intanethi zezona ndlela zilula zokufumana izatifikethi kwiiyunivesithi ezaziwayo phesheya ngelixa uhleli kamnandi ekhayeni lakho. Ezinye zazo zitshiphu kakhulu xa kuthelekiswa nezinto ezinokubiza wena ukuya kwelo lizwe ukuze ufumane isatifikethi esifanayo.
Ndithathe ixesha ndenza uphando ndibhala Iikhosi zesidanga sokuqala ezifumanekayo Kubafundi bamazwe aphesheya kunye nabasekhaya kwaye ezi khosi zonke zinokukhetha ukufumana isatifikethi esishicilelweyo ekupheleni kwenkqubo.
Ezi zifundo zibonelela ngezidanga ze-bachelor njengabo bonke abanye abafundi abebeye eyunivesithi kwikhosi leyo abanayo.
ICanada ililizwe elinomdla kakhulu ngabafundi bamanye amazwe ikwabonelela iikhosi ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi kwaye ungathatha inxaxheba kwezi zifundo usuka eCanada okanye ukhululeke naphina apho ukhetha ukuhlala ngaphandle kweCanada.
Into oyifunayo kukuqinisekisa ukuba uza kwi-intanethi ukuze ujoyine abanye nanini na xa kukho iklasi edibeneyo.
Ndaphanda ndaza ndabhala kwezinye simahla iikhosi ezikwi-Intanethi eCanada ezinezatifikethi onokuthi uthathe inxaxheba kulo naliphi na ilizwe lehlabathi. Ungajonga uluhlu ngekhonkco elingasentla.
Kukho izifundiswa ze-Unicaf ikakhulu eNigerian ezixhasa abafundi bamanye amazwe abafuna ukwenza izifundo zesidanga kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi. Ezi nkxaso-mali kwezinye iimeko zikhathalela malunga ne-70% yemirhumo yesikolo yabafundi kwaye incede uninzi lwamazwe aphesheya ukuba bafunde phesheya.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi lukunceda ngcono njengomntu othanda iinkqubo ze-Intanethi ezinezatifikethi ezixabisekileyo.
Ukuqhubela phambili, apha ngezantsi kukho iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi ezinokuprintwa zabafundi bamanye amazwe. Ungathatha inxaxheba nakweyiphi na kwezi nkqubo simahla njengoko unokhetho lokuthatha isigqibo malunga nokuba unokunikwa isatifikethi ekugqibeleni okanye hayi.
PHAWULA: Ezinye zezi zifundo zisimahla kodwa ukufumana isatifikethi emva kwekhosi, kuya kufuneka uhlawule ithokheni.
Nangona isatifikethi sibalulekile, ulwazi kwezinye iimeko lunokuba semxholweni nangakumbi.
Iikhosi ze-100 + zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada ezineZatifikethi eziPrintwayo
I-10 + yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziprintiweyo
Iikhosi zasimahla zoLawulo lweProjekthi kwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo
Iikhosi ze-50 + zasimahla kwiYunivesithi yaseHarvard ezineZatifikethi eziPrintwayo
Izifundo zasimahla zeMasters kwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo
I-17 iYunivesithi yasePrinceton yeZifundo eziSimahla kwi-Intanethi
Iikholeji ze-15 zaseYale zasimahla kwi-Intanethi
Iikhosi ze-27 zaSimahla kwi-Intanethi zaBafikisayo
I-20 + iYunivesithi yaseToronto iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi
Iikhosi zasimahla ze-37 ezikwi-Intanethi kwiQonga leCursera
I-30 + yasimahla ye-Ivy League yeeYunivesithi kwiikhosi ezikwi-Intanethi
ICandelo loLawulo lwezaBasebenzi
Intshayelelo kuphuhliso lomdlalo
UkuPhuhliswa kweeNkqubo zeMfono
Ishishini kwezorhwebo kuqoqosho oluhlumayo
Isiseko seGrafic Design
Izinto ezibonakalayo zoYilo loNxibelelaniso loMsebenzisi
Ukuba ujonga iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi ezinamabanga emfundo anokuprintwa ngohlobo lweziqinisekiso, ezi zifundo zidweliswe apha ngasentla sisiqalo esihle sophando lwakho.
The Ulawulo lwaBasebenzi lweCarlstone ikhosi yasimahla ekwi-intanethi inikezelwa kwiqonga leCorsera lelinye lawona maqonga afundwayo akwi-Intanethi kwihlabathi.
Isifundo siya kukunceda ufunde ukulawula indlela yokusebenza kwayo nayiphi na inkampani kwaye isatifikethi siyawuphucula amathuba akho okufumana umsebenzi wabantu abangomnye wemisebenzi enqwenelekayo kwezinye iinkampani.
Inkqubo yoLawulo lwaBasebenzi eKapron yasimahla ngesiNgesi kwaye ifuna ukuba abathathi-nxaxheba baqonde uLwimi lwesiNgesi. Kuya kubakho isatifikethi sokuprinta esihlawulelweyo kunye nesiza kuhlawulwa ekupheleni kwenkqubo.
Le yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-intanethi ezinesatifikethi esishicilelweyo esinikwa kwiqonga le-edX.
Ifuna malunga neeyure ezi-6 ukuya kwezi-9 ngeveki yokuzibophelela kwaye isatifikethi sikhutshwa esiphelweni senkqubo. Ifundisa umxholo osisiseko woyilo lomdlalo kunye nenkqubo kwaye ilungiselela abathathi-nxaxheba ukuba bathathe indawo yabo kwi-intanethi kwimidlalo yenkqubo.
Ukuba ufuna iqonga apho unakho funda ukuba ungaziphuhlisa njani mahala iinkqubo zomdlalo we-android, kuya kufuneka ufake isicelo soku.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi enesatifikethi esishicilelweyo sabathathi-nxaxheba inikezelwa kwiqonga le-edX labathathi-nxaxheba bamanye amazwe.
Uya kufunda ngee-API, i-HTML, i-QSL, i-CSS, njl.njl ekupheleni kwenkqubo kwaye ungaprinta isatifikethi sakho kwi-hardcopy emva kokuba sinikezelwe kuwe.
Ukuphela kwale khosi, uya kuba noxanduva loyilo losetyenziso lwakho olusebenza ngokupheleleyo. Ikhosi inikezelwa kwiqonga le-edX kwaye isatifikethi esishicilelweyo siyafunyanwa ekugqibeleni.
Le khosi yasimahla iya kukufundisa yonke into ekufuneka uyazi ukuphuculwa kwesoftware kwaye kulindeleke ukuba ihlale ixesha leeveki ezili-13 kungabikho ngaphantsi kweeyure ezingama-6 ukuzibophelela ngeveki.
Ukuba ufunda ikhosi yeshishini eyunivesithi, oku kuyakukudibanisa neCV yakho.
Le khosi iza nesatifikethi esiqinisekisiweyo esishicilelweyo. Le khosi yasimahla yokushishina kwi-Intanethi ngezatifikethi ezinokuprintwa kulindeleke ukuba zihlale kangangexesha leeveki ezi-6 kungabikho ngaphantsi kweeyure ezi-3 zokuzinikela ngeveki.
Ukuba ungumthengisi wentengiso yedijithali okanye unomdla kuyo nayiphi na indlela yentengiso okanye ufuna umsebenzi kwicandelo lezentengiso, le khosi yasimahla yokuthengisa kwi-intanethi enesatifikethi esishicilelweyo iya kuba luncedo kuwe.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi igubungela ulawulo lweprojekthi kwimeko yeeprojekthi ze-IT, kubandakanya neeprojekthi zesoftware.
Ekupheleni koku ikhosi yasimahla ekwi-intanethi kwizimali ezihlanganisiweyo, Uya kufumana izakhono kuKuhamba kweMali okunesaphulelo, ukwenziwa kwezigqibo, imali yequmrhu kunye nohlalutyo lokuhamba kwemali.
Yikhosi yasimahla ekwi-Intanethi enesatifikethi esishicilelweyo ekwabelwana ngaso kwi-LinkedIn. Inikwa yiYunivesithi yasePennsylvania eUnited States kwaye isatifikethi osifumanayo ekugqibeleni sikhutshwa yile yunivesithi.
Le khosi inikezelwa kwi-intanethi simahla yiZiko lobugcisa laseCalifornia kwaye kulindeleke ukuba likuthathe ubuninzi beeveki ezi-5 ukugqiba kwaye ufumane isatifikethi sakho kwiziko.
Ikhosi iya kuthi ukuphucula izakhono zoBuchule boBugcisa, iGraphics, iTheyori yoyilo kunye nethiyori yemibala.
Olu lulwandiso lweZiseko zoYilo loMzobo. Inikwa liziko elifanayo kwaye ingathatha malunga neeveki ezi-4 ukuyigqiba.
Ekupheleni kwale khosi, uya kuthi ukufumana izakhono kwiAdobe Illustrator, kwiAdobe Photoshop, kwiAdobe Indesign.
Zonke ezi zifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi ezinokuprintwa apha zinikezelwa ziiyunivesithi zamanye amazwe kunye namaziko emfundo kwaye izatifikethi ozifumanayo ekupheleni kwezi khosi zivela ngqo kwezi yunivesithi nangona ezinye zezi zifundo zinikezela ngezatifikethi ngentlawulo.
Ezi zifundo zingasimahla kodwa ziluncedo kakhulu kwiindawo ezenzelwe zona. Ukuba unika ingqalelo kwizifundo, yenza izabelo zakho, landela zonke iingcebiso, unokuba yingcali kwicandelo elikhethiweyo.
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zoQeqesho lweKhompyuter
IiYunivesithi eziSimahla zeFundo eziSimahla eMelika kunye nendlela yokufaka isicelo ngasinye
I-9 yeeDigri eziPhambili zasimahla kwi-Intanethi kunye neeDigri zeSemina
Izifundo zasimahla kwiYunivesithi yaseYale
Iikhosi zasimahla kwi-Intanethi zeYunivesithi yasePrinceton
Iikhosi zasimahla ze-Ivy League kwi-Intanethi
Intsebenziswano neGosa at Study Abroad Nations | Bona amanye amanqaku am
Study Abroad Nations.Sibhale amakhulu ezikhokelo ezincede izigidi zabafundi kwihlabathi jikelele. Ungaqhagamshela nathi nangaliphi na ixesha ngokusebenzisa naliphi na iqonga lethu leendaba zentlalo okanye nge-imeyile.
Ezi Tips ezintsha kunye neeMfihlo zeCasino ezikwi-Intanethi kufuneka wazi ngo-2022
Iinzuzo zesiDanga esithweswe isidanga kwi-Counselling
Eyona misebenzi ilungileyo yaBafundi abathetha IsiNgesi
Indlela yokuBhala iiQuotes kwisincoko: Isikhokelo esifutshane saBafundi
Izifundo zasimahla ezikwi-intanethi ezinezatifikethiizifundo ezinesiqinisekiso sasimahlaizifundo zekhompyuthaiikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezinesiqinisekiso sokugqitywaizifundo ze-intanethi zamahhala kunye neziqinisekisoIzifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi eziprintwayoizifundo zekhompyuthaiikhosi ezikwi-Intanethi zabafundi bamanye amazweiikhosi ezikwi-Intanethi ezinezatifikethi ezinokuprintwa
Post Previous:Iingcaphuno ezikhuthazayo zokuqonda amandla okunyaniseka
Okulandelayo Post:Yeyiphi iMidlalo eLula ukufumana iScholarship?
Igqityelwe ukuhlaziywa ngeenyanga ezi-5 ngu UAdaeze Nwachukwu